रातिमा देख्ने यस्ता अनेकौ सपनाहरुले भविष्यबारे बताउछ यस्तो संकेत, जानिराखौ! – List Khabar
Home / रोचक / रातिमा देख्ने यस्ता अनेकौ सपनाहरुले भविष्यबारे बताउछ यस्तो संकेत, जानिराखौ!
admin January 23, 2022 रोचक Leaveacomment 87 Views
हरेक व्यक्तिले सुत्ने समयमा केहि न केहि सपना देखेकै हुन्छ। सपना एक काल्पनिक घटना जस्तै हो। शास्त्रक अनुसार सपना दिनभरि भईरहेका घटनाको आधारमा पनि हुन्छ। प्रायः मानिसहरू दिनभरि जुन कुरा अत्यधिक सोच-विचार गर्छ, उनीहरू त्यहीँ सपनामा देख्छन्। तर हरेको सपनाको कुनै अर्थ हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन।
धेरै मानिसहरू खराब सपना देख्नु उनीहरुको नजिकको आफन्तको मृत्यु हुने सक्ने संकेत हो भन्ने विश्वास गर्छन्। यधपी कुनै सपना यति भयानक हुन्छ कि सपना देख्ने मान्छे निन्द्रामा नै डराउँछन् ।
स्वप्न शास्त्रअनुसार हामीले देख्ने सपनाको कुनै न कुनै अर्थ हुन्छ। त्यसकारण प्राचीन कालदेखि प्रायः सपनालाई वेवास्ता गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता छ। यो कुनै कुरा वा घटनाको संकेत पनि हुन सक्छ। यधपी सपना किन देख्छौँ, यसको पछाडिको कारण के हो, यो आज पनि रहस्य नै छ।
विज्ञानले सपनाहरुको बारेमा कुनै विशिष्ट पुष्टि गरेको छैन। कहिले-काहिँ सपना मार्फत हामीलाई पहिलेदेखि नै केहि घटनाको आशंका हुन थाल्छ । स्वप्न शास्त्रमा सपनालाई भविष्यमा घट्ने घटनाको सूचक मानिन्छ।
१. यदि कुनै व्यक्तिले सपनामा आँप खाएको देख्छ भने यसले छिट्टै धन लाभ हुन सक्छ। साथै सपनामा दियो बलिरहेको देखेको शुभ मानिन्छ। यसले छिट्टै आर्थिक लाभ हुने सूचना दिन्छ।
यदि कुनै व्यक्तिले सपनामा गोबर देख्छ भने स्वप्न शास्त्र अनुसार भविष्यमा त्यस जनावरबाट कुनै प्रकारको धन लाभ हुन सक्छ। यसबाहेक पानीमा तैरिएको सपना देखे आर्थिक लाभ हुन्छ। सपनामा कुनै बच्चालाई मन खोलेर हाँसेको देखे अचानक धन लाभ हुन सक्छ।
२. समस्याको संकेत -यदि तपाईले सपनामा आफैलाई हाँसेको देख्नुहुन्छ भने यसले भविष्यमा आउने समस्याको संकेत गर्छ। सपनामा कुनै महिला हाँसिरहेको देख्नुहुन्छ भने यसले घरमा हुन सक्ने झगडाको संकेत गर्छ। त्यस्तैगरी सपनामा बच्चा रोएको देख्नुहुन्छ भने यसले आर्थिक घाटा हुन सक्छ।
यदि सपनामा कैची देख्नुभएको छ भने यसले परिवारमा झगडा हुन सक्छ। यसबाहेक सपनामा समस्यामा परेर आफुलाई घुमेको देख्नुभयो भने यसले भविष्यमा आउने समस्याको संकेत गर्छ।
३. विवाहको संकेतको सपना- सपनामा मह खाईरहेको देख्नुभयो भने, यसले तपाई वा तपाईको घरमा छिट्टै बिहे हुन सक्ने संकेत गर्छ। सपनामा रंगी-बिरंगी कपडा आकाशमा उडिरहेको देख्नुको मतलब तपाईको छिट्टै मनपर्ने व्यक्तिसँग विवाह हुन सक्छ।
आफैले औँठी लगाएको देखेमा तपाईले छिटै जीवनसाथी मिल्न सक्ने संकेत हो। स्वप्न शास्त्र अनुसार सपनामा कुनै पुरुषले दारी बनाएको देक्नुभयो भने देख्नुभयो भने यसले जीवनमा चलिरहेको वैवाहिक समस्यालाई टाढा गर्छ। सपनामा आफैलाई नाचेको देखे छिट्टै बिहे हुने सूचक मानिन्छ।
४. बिरामीको संकेत सम्बन्धित सपना- सपनामा तपाईले आफैलाई शौचालय गईरहेको देख्नुभयो भने यसले भविष्यमा हुने पेट सम्बन्धित समस्याको संकेत दिन्छ। आफुलाई रातो चन्दन लाएको देख्नु ,कपाल झर्नु र नङ काट्नु जस्ता सपनाले भविष्यमा हुने बिरामीको बारेमा बताउँछ।
५. शुभ समयको संकेत दिने सपना- यदि कुनै व्यक्तिले आफुलाई नदीमा स्नान गरेको देख्नु कार्यक्षेत्रमा राम्रो समय आउन लागेको मानिन्छ । सपनामा आफुलाई हावामा उडेको देखे यसले शुभ समय आउन लागेको संकेत गर्छ। सपनामा रोएको देखे पुरानो रोगबाट छुट्कारा मिल्न सक्छ।
स्वप्न शास्त्र अनुसार सपनामा जमुना देख्नु निकै शुभ मानिन्छ। कुनैले व्यक्ति सपनामा आफैलाई किनारामा बसेर रोएको देख्दा भविष्य शान्तिपूर्ण रहन्छ।
Previous घरमै आइसोलेसनमा बस्दा के-के खाने,कसरी बस्ने ?
Next यस वर्षको एसईई आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने